Reer Qashqashaad - Page 3 - Politics - Somali Forum - Somalia Online
Ilmahan waa habaw asagaa u baahan in reerkiisii loo geeyo,
Adeerkiis axmed madoobe yuu soomaali oo dhan ka yaqaan dal iyo dadba.
Arintu farmaajo iyo khayre ma'ahan aragtidayda
Arintu waxa ku taxaluqdaa (Nadaam)
Waana mushkilada koowaad oo reer gal-mudug haysata.
Waxaan kuu shagayo kaftan iyo cay midna ma'aha waligaa khalad ha iga fahmin.
Reer gal mudug waxa ay ku heshiin karaan oo kaliya waa (isbaaro) iyo jufooyinka sidee loogu qaybiyaa.
Been kuu sheegi maayee hal maalin gelinkeed bay ku kala tuuri lahaayeen, faataxadana isugu mari lahaayeen.
Nadaamkuna wuxuu ka hor imaanayaa isbaarada suuqa-madaw burcad badeedka doollarka madaw dadka layska dilo iwm.
Ama farmaajo ha tago ama khayre haka hor maro, haday gal mudug intay heshiiyaan horay isu raacaan waxaan kuu sheego dib dambe ha u akhrin.
Deegaanada soomaalida dhamaantiis cuqubo badan yaa laga goynayaa walaal, waana dambi ay horay u galeen.
Qaar cuqdad yaa lagu saladay oo dad xanuusan bay daawo ka doonayaan.
Qaar caqli xumo yaa lagu saladay, dab-qaad iyo foox bay ka daba wadaan gaalo gumaysata.
Qaar inay fidno ka shaqeeyaan yaa lagu saladay iyo dhaqan dumar.
Qaar imaan la'aan yaa lagu saladay iyo inay xaaraan cunaan.
Qaar ayagoo wabiyadii kor fadhiya yaa haraad lagu saladay.
Qowmka la ciqaabo alle ma nicin rajay leeyihiin, waxaa loo fududeeyaa xisaabta aakhiro mar haday aduunka ku ceeboobeen.
Waligaa dhanka siyaasada ha uga hadlin maamulada soomaalida dhanka dhaqanka ka fiiri.
Waano abuur baa ka horaysay.
Na nacda iska wad. Waqtigi xisabta aya dhow.
Meesha nabi haddii loo soo diro inaanan warkiisa la maqleynin waala ogyahay. Kheyre walaa Kheyrto qof wax ka qaban kara malaha dad hoggaan sheeganaayo haddana aanan tanaasul, samir, wada qeybsi iyo dulqaad qaamuuskooda ku jirin.
Kheyre hortiisa meeqo maamul iska soo horjeedo ka jiray? Ximan iyo Xeeb, tan Gaalkacyo, tan Dhuusamareeb ee Ahlusunna iyo deegaanada kuwii afka duubnaa heystaan. Meeqo xarun kumeel gaar ah soo maray? Gaalkacyo, Cadaado iyo Dhuusamareeb. Ilaa iyo haddana laguma heshiin xarunta dhabta ah.
Waa deegaanka ugu tirakoob yar, ugu horumar liito Soomaaliya. Waxaana ugu wacan isjiid jiidka aanan micnaha lahayn.
Wararkii ugu dambeeyey ee laga helayo magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa sheegaya inay weli hakad ku jiraan howlihii doorashada ee maamulkaas kadib khilaafkii soo kala dhex galay Dowladda Dhexe iyo Ahlu Sunna, oo garab ka heleyso inta badan musharixiinta u taagan xilka madaxweynimo.
Reer Qashqashaad xildhibaanadaan dhageysta.
Odayaasha Galmudug oo soo saaray toddoba qodob oo xasaasi
Odayaasha dhaqanka, gaar ahaan kuwa saxiixayaasha Galmudug oo xalay kulan ku yeeshay magaalada Dhuusamareeb ayaa todobo qodob ka soo saaray doorashada madaxweynaha Galmudug iyo ku xigeenkiisa.
Warsaxaafadeedka ka soo baxay odayaasha ayaa ugu horreyn waxaa dowladda federaalka loogu baaqay in ay taageerto xildhibaanada baarlamaanka Galmudug, islamarkaana ay ku garab istaagto dhismaha maamul mid ah.
Sidoo kale ayaa odayaasha dhaqanka ayaa ka dalbaday baarlamaanka in aan dib loo dhigin waqtiga doorashada, islamarkaana la qabto waqtiga loo asteeyey.
Qoraalkaan ayaa sidoo kale lagu faray xubnaha 20-ka ee Ahlu Sunna ugu jira baarlamaanka Galmudug inay gutaan waajibaadka loo igmaday, kana fogaadaan wax kasta oo keeni kara khilaaf iyo dib u dhac ku yimaada doorashada maamulkaasi.
Saxiixayaasha Galmudug ayaa dhinaca kale beesha caalamka ka dalbaday inay teegeerto dhismaha loogu jiro maamul mid ah oo ay u dhan yihiin gobollada Galgaduud iyo Mudug.
Ugu dambeyn waxa ay odayaashaan u soo jeediyeen musharraxiinta u taagan xil ka madaxweynaha iyo ku xigeenkiisa inay ka qeyb qaataan tartanka loogu jiro doorashada.
Guddiga Doorashada Madaxweynaha iyo ku Xigeenkiisa ee Baarlamaanka Galmudug garabka wasaaradda Arrimaha Gudaha ayaa soo saaray hab raaca Doorashada madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka.
Xildhibaanada Ahlu-Sunna oo lagu arkay fadhiga maanta ee baarlamanka Galmudug
8 ) – Xildhibaan Xuseen Axmed Carab
Wararka naga soo gaaraya Dhuusamareeb ayaa sheegaya in goordhow magaaladaasi uu ka furmay kulan ay leeyihiin xildhibaanada 2aad ee baarlamaanka maamulka Galmudug.
Qoorqoor oo loo doortay madaxweynaha Galmudug
Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa goor dhow madaxweynaha cusub ee maamulkaasi u doortay, Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, kadib markii uu ku guuleystay doorasho ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Xildhibaanada baarlamaanka Galmudug ayaa sidoo kale isla markii guda galay u codeynta musharraxiinta u taagan xil ka madaxweyne ku xigeenka, kuwaas oo kal ah:-
1-Cali Daahir Ciid, 2-Axmed Yuusuf Warsame (Taajir), 3-Saadaq Cabdullaahi Xaashi, 4-Maxamed Xaashi Cabdi (Carabeey) iyo 5-Cabdiqani Sheekh Cali Diini.
Xasan Sh. Maxamuud's former right hand man is congratulating madaxweynaha cusub. He knows the winds of change are not stoppable.
Cabdikariim Guuleed oo u hambalyeeyey Qoorqoor
Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Galmudug Siyaasiga Cabdi Kariim Xuseen guuleed ayaa hambalyo u direy Madaxweynaah Cusub ee loo doortey Madaxweynaha Galmudug ee Axmed Cabdi Kaariye (Qoorqoor).
Qoorqoor: Sharaf bey ii tahay inaan xiriir la leeyahay madaxda DF Soomaaliya